Qaamni sadaffaan Oromoo araarsee hin beeku jedhe ODP ibsa baasen – Fana Broadcasting Corporate
Qaamni sadaffaan Oromoo araarsee hin beeku jedhe ODP ibsa baasen
Finfinnee, Amajjii 3,2011(FBC)- Seenaa qabsoo ummata Oromoo keessatti aadaan siyaasaa wal-cabsuu fi wal-faallaa dhaabachuu baramaa ture jedheera Oromoo Demokraatiik Paartiin(ODP) ibsa har’a baasen.
Ibsi guutuun kinooti;
Wal-cabsuu fi wal-faallaa dhaabachuun kun ammoo diina Oromoon akka mataa ol hin qabnne fedhuuf carraa guddaa ture.
Yeroo Oromoonni lamaan wal-dhabaa turan kanatti qaamni sadaffaan tarsiimoo Oromoon qabsaa’ee ittiin injifatuu osoo hin taane tarsiimoo ittiin wal-balleessuu kennaafii kan ture.
Yeroo kanatti garaagarummaan humnoota qabsoo Oromoo giddu jiru guddatee miti.
Rakkoo kana hiikudhaafis qaamni sadaffaan barbaachisee miti. Garuu ammoo galmi qabsoo Oromoo tokko ta’ee osoo jiruu sababa waldhaggeeffannaa dhabuu murnoota muraasaatiif jecha qabsoon Oromoo gangalachaa turee jira.
Har’as seenaa darberraa barachuu dhabuurraa kan ka’e dhimma Oromoorratti qaama sadaffaa affeeruun saalfachiisaadha. Dhimmi qaama sadaffaa nama hawwisiisu kunoo maali?
Aadaan siyaasaa Oromoo wal-ajeesuu fi wal-cabsuu keessaa bahee kallattii qarominaa qabachuu qabaan qaama sadaffaa hin barbaadu.
Qawwedhaan osoo hin taane yaadaan falminee wal-yaa mo’annuun qaama sadaffaa hin barbaadu.
Itti gaafatamummaa akka biyyaatti waliin qabnuuf waloon qabsoofnee cehumsa gara demokraasitti taasifamu erga milkeessineen booda aangoo dhugaa ummata keessaa argamuun qaamni carraa argate biyya yaa gaggeessuun qaama sadaffaa hin barbaadu.
Oromoo Oromoo ajeesuun bu’aan siyaasaa argamu siyaasa farra Oromummaati waan ta’eef dhaabachuu qabaan qaama sadaffaa hin barbaachisu.
Kanaan ala wanti irratti waliigalamu jira hin fakkaatu.
Yoo aarsaan qeerroo qarreen keenya qabsoo ummata Oromootiif jecha kaffalan garaa nu nyaatu ta’e dhimmoota armaan olii kanarratti waliigaluuf qaama sadaffaa hin barbaachisu.
Nuti biyya lamaa miti. Saba lamaa miti. Nuti warra ajandaan waloo qabnuu dha. Ajandaan waloo keenya ammoo ajandaa injifannoo ummata Oromoo bu’uura cimaarratti ijaaruudha.
Ummata Oromoo guddummaa kaleessaatti deebisuudha. Kana gochuuf ammoo qawween nu hin barbaachisu. Kan nubarbaachisu tarsiimoo dha.
Kan nu barbaachisu imaammata. Kan nu barbaachisu tokkummaadha. Kan nubarbaachisu ilaaf ilaameedhaan walhubachaa deemuudha.
Ajandaa diinaa dhiisnee ajandaa Oromummaarratti hojjechuudha. Kanaaf ammoo qaamni sadaffaan waan barbaachisu hin fakkaatu.
Qaamni sadaffaan kunoo eenyu? Yoo jaarmiyaalee siyaasaa ta’an, ABO shaneedhaan alatti hundinuu qabsoo karaa nagaa kanarrtti amantaa guutuu qabaachuu qofa osoo hin taane, hojiirra oolmaa isaatiif kutannoo ol’aanaadhaan hojjechaa jiru.
Sanarra darbee galma walfakkaatuuf bakka kudhanitti cicciramuun hin barbaachisu jechuun gara walitti makamuutti deemamaa jira.
Jaarsolii, abootii gadaa fi abootii amantaa yoo ta’an dhimmi kanarratti yeroo meeqaatama jaarsummaa taa’aniiru. Mari’ataniiru.
Qabsoo karaa nagaarratti ejjennoo cimaa qabataniiru. Qaamni sadaffaan kun eenyu laata?
Ajandaa qabsoo Oromootiif qaamni sadaffaa kun dhuguma barbaachiseeti moo dubbiin “ warra ebeluu hin beeknuun kan ergaa diddaati” akka jedhan sana taate?
Sochiin kilaboota atleetiksii Oromiyaa guddisuuf kallattiin kaa’ame
Paarkonni ijaarramanii hojii eegalan lammiilee kuma 42f carraa hojii uumaniiru
Siyaasa biyyattii tasgabbeessudhaan misooma jajjabeessuun…
Hoggansa waggaa tokkootin bu’aalee jajjaboo…
Manni Maree Naannoo Tigraay walga’ii idileesaa booru…